Asked by mikebravo 11 izinyanga ezidlule
Asked by godson101 5 iminyaka edlule
Asked by nelmia 5 iminyaka edlule
Asked by BigDogsRock1 5 iminyaka edlule
Asked by Betsy0814 5 iminyaka edlule
Hi, We have a computer that gets shared between a few people but it uses a generic logon. However, individual people may want to use Firefox to check the email and thing… (funda kabanzi)
Asked by kelemvor33 5 iminyaka edlule
Asked by raycfaria 5 iminyaka edlule
My startup disk was over capacity so I force quit out of all of my running applications and shut down my computer. When I started it back up I emptied some files to make … (funda kabanzi)
Asked by newblack 5 iminyaka edlule
I have a my Firefox profile and a copy of its folder. After a certain amount of time launching Firefox with this profile, the history and cookies are missing in the brows… (funda kabanzi)
Asked by SU001 5 iminyaka edlule
Asked by MadsBec 4 iminyaka edlule
Asked by marzut 4 iminyaka edlule
Asked by jsubia 4 iminyaka edlule
Asked by vmanes 3 iminyaka edlule
When I want on-line tonite, a message at the bottom of the Firefox page said that if the web-site was slow, go into Troubleshooting and Refresh. I did that but now have … (funda kabanzi)
Asked by imelda16 3 iminyaka edlule
I cannot open Firefox on my Windows 10 PC Says that Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible. I have tried to uninstall, and then reinstal… (funda kabanzi)
Asked by cannot 2 iminyaka edlule